अन्तर्राष्ट्रिय Archives - Page2of 14 - Voice Of Nepal
बग्दाद अदालतले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । ईराकी अर्धसैनिक कमाण्डर अबुु महदी अल मुहान्दिसको हत्याबारे छानिविन गरिरहेको अदालतले ट्रम्पविरुद्ध यस्तो निर्णय लिएक...
काठमाडौं । अमेरिकी खोप निर्माता कम्पनी मोडेर्नाले आफ्नो कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोपले दुई वर्षसम्म सुरक्षा दिने दाबी गरेको छ । मोडेर्नाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बिहीबार यस विषयमा अझै धेरै...
इभांका ट्रम्पले हिंस्रक समर्थकलाई देशभक्त भनेर डिलिट गरिन् ट्वीट
अमेरिकाका संसद भवनमा भएको हिंसापछि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पकी छोरी इभांका ट्रम्प हमला गर्नेहरुलाई देशभक्त भनेपछि निशानामा परेकी छिन् । उनको एउटा ट्वीट यति आलोचित भयो कि उनले त्यो डिलिट नै गर्नुपर्य...
हामी बसेको पृथ्वी बाहेक अन्य कतै हामी जस्ता अथवा हामी भन्दा उन्नत किसिम प्राणी छन् वा छैनन् भन्नेबारे चर्चा चलेको लामो समय बितिसक्यो । तर अझै पनि केही ठोस जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। पृथ्वीमा हुने ...
सउल । कोरियाली रेलमार्ग अनुसन्धान संस्थान ‘कोरेल’ले विश्वको सबैभन्दा द्रुतगतिमा कुद्ने रेलको सफल परीक्षण सम्पन्न गरेको छ । ‘कोरेल’को पछिल्लो रेल संस्करण हाइपरट्युब रेल प्रतिघण्टा एक हजार किलोमिटरका दर...
कहाँ हराए ज्याक मा ? सञ्चारमाध्यमले गर्दैछन् यस्तो अनुमान
एजेन्सी । अलिबाबा कम्पनीका संस्थापक ज्याक मा पछिल्ला दुुई महिनादेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा उनको विषयमा अनेक अड्कल हुन थालेको छ । एक टिभी शोमा उनी जजका रुपमा सहभागी हुने...
वार्षिक १० करोड डोज कोरोना खोप उत्पादन बढाउने मोडर्नाको लक्ष्य
काठमाडौं । अमेरिकी खोप निर्माता कम्पनी मोडर्नाले सन् २०२१ मा कोरोना खोप उत्पादनको लक्ष्य बढाएको छ । सोमबार कम्पनीले सन् २०२१ मा ६० करोड डोज कोरोना खोप उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको बताएको हो । यसअघि कम्प...
हिन्दुस्तान टाइम्सको दाबी : चीनको एक टोली नेकपा मिलाउन काठमाडौंमा अझै सक्रिय छ
काठमाडौं । भारतीय पत्रिका दि हिन्दुस्तान टाइम्सले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको राजनीतिक कोर्सलाई प्रभावित पार्ने कोसिस जारी राखेको र तीन सदस्यीय टोलीलाई काठमाडौंमै राखेको दावी गरेको छ । स...
ब्रम्हाण्डमा पृथ्वीबाहिर पनि जीवनको अस्तित्व सम्भव छ भन्ने कुराको संकेत ? हाम्रो सौर्यमण्डलदेखि सबैभन्दा नजिक अर्को सौर्यमण्डल 'अल्फा सेन्टुरी सिस्टम' (Alpha Centauri system ) हो। यस सिस्टममा तीनवट...
अमेरिकी कम्पनी फाइजरले निर्माण गरेको कारोनाविरुद्धको खोपको पाँच व्यक्तिमा गम्भीर साइड इफेक्ट देखिएको छ । फिनल्याण्डको मेडिसिन एजेन्सीले यसबारे जानकारी दिएको हो । दुई दिनअघि मात्र फाइजरलाई विश्व स्वास्...